काठमाडौँ । अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुल अनामनगर काठमाडौँले आयोजना गरेको OPS Inter-School Friendship Quiz Contest 2076 सम्पन्न भएको छ ।
उपत्यकाका जम्मा २१ वटा विद्यालयहरुले सहभागिता जनाएको कार्यक्रममा लोक सेवा आयोगको परीक्षाको शैलीमा प्रथम पटक प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । उक्त छनोटमा परेका उत्कृष्ट आठ टिम बिच दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो ।
विद्यालयका निर्दे्रशक श्री डी.वी. निरौलाको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डा. सिद्धिप्रसाद कोइराला तथा सदस्य वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।